Huawei qoqqobbiin Ameerikaan walqabatee himannaa haaraa irratti bane - BBC News Afaan Oromoo
Huawei qoqqobbiin Ameerikaan walqabatee himannaa haaraa irratti bane
5 Muddee 2019
Dhaabbanni teeleekoom guddaan Chaayinaa murtee to'attoonni Ameerikaa akka balaa nageenya biyyaaleessaatti isa ramanuun walqabatee himannaa seeraa eegaleera.
Himannaan Huawei'n Ameerikaarratti bane kunis erga Komishinarri Komunikeshinii Federaala Ameerikaa dhaabbata teeleekoom Chaayinaa kan mobaayilii baadiyaaf dhiyeessuu irratti qoqoobbaa kaa'een booda.
Dhabbatichis raabsaa bilbilaa deegarsa mootummaa doolaara biiliyoona 8.5 meeshaalee Huawei bitan irratti qorannoo akka geeggeffamu godheera.
Ragaan jabaa sodaa nageenyaa uumu "hin jiru" jedhameera.
Kunis adeemsa seera Huawei fi mootummaa Ameerikaa jiddutti deemaa jiru isa yeroo dhihooti.
Dhaabbatichi mana murtii Ol-Iyyannaa murtee kana akka jijjiiru gaafateera. Murtichis akka dhaabbatoota baadiyyaa Ameerikaa keessatti meeshaalee tajaajiloota hawaasummaaf oolan maallaqa mootummaa akka hin binne kan jedhudha.
Galma koonfiransii Huawei kan Shenzhen'tti argamutti dubbii kan taasisan ogeessi seeraa Song Liuping akka jedhanitti, "Mootummaan Ameerikaa dhaabbanni Huawei yaaddoo nageenyaa biyyatti akka ta'e ragaa gahaa hin dhiheessine. Kunis waan ragaa qabatamaan hin jirreef."
Adeemsi seera kun isa lammaffa waggaa kanaa yoo ta'u; inni wixinee bulchinsa Tiraamp irratti.
Hoggantuun 'Huawei' Kaanaadaatti to'annoo jala oolte
Feesbukiin bilbilawwan Huawei irratti appii tolfachuu uggure
Huawei Caamsa keessa murtee dhaabbatoonni mootummaa Ameerikaa meeshaalee dhaabbaticha akka hin binne murteessee ture.
Ameerikaan biyyoonni biroo akka Huawei'n tajaajila teleekoom 5G isaanii akk hin dhaabne biyyootarratti dhiibbaa geessisaa jirti.
Walgahii Nato gaafa Roobii Waatfoord keessatti geeggeeffamaa jiruun MM UK Booriis Joonsan akka jedhanitti murteen Huawei Biriitan keessatti teleekoom 5G dhaabu walii galtee Ameerikaa waliin qaban 'Five Eyes' jedhamu Ameerikaadhaan durfamurratti hundaa'a jedhaniiru.
Obbo Joonsan kana kan jedhan ega Doonald Tiraamp dhimmicha walgahii gaafa Kibxata irratti kaasaniin boodadha.
Dhaabbatichi waldhabdee biyyoota addunyaarratti diinagdee guddaa qaban laman jiddutti rakkachaa jira.
Huawei'n teeknooloojii 5G kan dhaloota dhufuu oomshuufi gurguruun dhaabbata dursaa jirudha.
Hoggantuun Huawei Meng Wanzhou Kaanaadaatti to'annoo jala oolte
6 Muddee 2018
Feesbukiin bilbilawwan Huawei irratti appiiwwan tolfachuu dhorke
9 Waxabajjii 2019
Toogootti buufanni filannoo 'sobaa' hundaa'uu mormitoonni komatan
'Bilbillii fi interneetiin cufamuun oppireeshinii gaggeessinuuf nu fayyadeera'
Obboleewwan ganna 98 fi 101 waggoota 47 booda wal argan